China HDMI to VGA mpanova ho an'ny 1080p mpanamboatra sy mpamatsy |Wellink
Modely : HVC11A
HDMI converter/adapter dia mpanova feo sy horonan-tsarimihetsika avo lenta izay mamadika fitaovana famoahana HDMI ho interface VGA, izany hoe afaka mamadika ny famantarana HDMI an'ny solosaina, boaty misy famaritana avo lenta, mpilalao DVD, kahie ary zavatra hafa. Ny fitaovana HDTV amin'ny famoahana famantarana VGA, ny mpampiasa dia afaka mamoaka famantarana amin'ny projectors avo lenta, fahitalavitra LCD avo lenta, mpanara-maso ary fitaovana fampisehoana multimedia hafa.
FRS tontonana roa
Ny akorandriaka vokatra HDMI splitter dia vita amin'ny fitaovana ABS matanjaka, miaraka amin'ny endrika tsotra sy lamaody.
* Tohano ny fampidiran-dresaka HDMI iray ary ny famoahana interface VGA iray;
* Mampiasà interface tsara HDMI 1.4, manohana CEC, mifanaraka amin'ny HDCP;
TSY mifanaraka amin'ny fitaovana HDMI manana hery ambany toy ny SONY PlayStation 4, Apple MacBook Pro misy Retina Display, Mac mini ary Apple TV.Ho an'ny fitaovana HDMI manana hery ambany dia mividiana Moread HDMI to VGA Adapter miaraka amin'ny Hery sy Audio (fikarohana B01MS611LJ )
TSY mifanaraka amin'ny mpilalao DVD na Blu-ray izay mila lakilen'ny HDCP hamerenana ny votoatin'ny zon'ny mpamorona
TSY bi-directional, tsy mahazaka fifandraisana avy amin'ny loharano VGA mankany amin'ny monitor / fahitalavitra HDMI
TSY manohana ny fifindran-peo, ny feo dia azo alefa avy amin'ny mpandahateny anatiny ihany
AZA mametraka ny famahana ny loharano HDMI ho ambony noho ny famahana ambony indrindra amin'ny fanaraha-maso/fahitalavitra, mety tsy afaka manitsy ny famahana ny tenany ny modely taloha.
Fitaovana fampidirana: loharano famantarana misy interface tsara HDMI, toy ny solosaina, kahie, DVD, PS3, boaty napetraka, sns.
Fitaovana fampisehoana: Asehoy ny fitaovana miaraka amin'ny interface VGA, toy ny monitor, TV, projector.
Vao azoko io ary ny olana dia rehefa mampifandray azy aho dia tsy mandeha ny audio.Inona no azoko atao mba hitazonana ny feo amin'ny loharano niandohana?
Nanana olana mitovy amin'izany koa aho.Ny HDMI dia mitondra feo, noho izany dia manandrana maka feo avy amin'ny solosaina izy, izay manidy ny jack headphone.Tsindrio ny fanalahidy Windows ary tsindrio ny Settings.Ao amin'ny Settings, tadiavo ny firafitry ny Feo (na Audio).Ovay ny loharanon-peo avy amin'ny mpanara-maso anao ho lasa mpandahateny an'ny solosaina.Natomboko indray, ary niasa indray.Ny orinasa manao izany dia tokony hampiditra toromarika miaraka aminy.
Hahomby ve izany raha mamadika pc hdmi ho tv vga aho?
Eny, afa-tsy ireo fitaovana manana seranan-tsambo HDMI ambany toy ny SONY PS4 (PlayStation 4) sy Apple MacBook Pro miaraka amin'ny Retina Display, Apple TV, Mac mini, Mac mini Server, Mac Pro.
Ho an'ireo fitaovana seranan-tsambo HDMI hery ambany ireo dia tokony hividy adaptatera HDMI mankany VGA miaraka amin'ny famatsiana herinaratra fanampiny ianao: www.amazon.com/dp/B01MS611LJ.
Hiasa amin'ny fampifandraisana ny PS4 amin'ny fahitako Samsung ve izany?
Ity vokatra ity dia TSY mifanaraka amin'ny fitaovana misy seranan-tsambo HDMI ambany toy ny SONY PS4 (PlayStation 4) sy Apple MacBook Pro miaraka amin'ny Retina Display, Apple TV, Mac mini, Mac mini Server, Mac Pro.
teo aloha: USB Type-C mankany HDMI Adapter
Manaraka: Ny fanitarana famantarana HDMI 7.5m dia manohana ny vahaolana 4K&2K